Esi nyocha nyocha | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home gbasara Anyị Otu esi enweta nyocha
N'elu Ụgwọ Ụgwọ Ọrụ, anyị na-achọsi ike iji nweta ihe omuma sayensi kachasị ọhụrụ na nke kachasị mkpa iji nyere ndị na-agụ akwụkwọ anyị aka ịghọta nghọta, mmekọahụ, porn na ụbụrụ. Na Ngalaba Resources anyị, anyị na-enye ihe omumu nke mmụta sayensị anyị gụrụ.
Kedu ka m ga - esi gụọ akwụkwọ nyocha mbụ?
Ụfọdụ akwụkwọ sayensị dị site na ịnweta ohere ma nweere onwe ha. Otú ọ dị ọtụtụ ndị na-apụta na akwụkwọ akụkọ bipụtara ụlọ ọrụ azụmahịa. Enwere ike ịnweta ohere site na ikikere. Nke a pụtara na ị ga-akwụ ụgwọ ịnweta ha. Ole na ole mmadu nwere ike ime nke a. A na-ebipụta ọtụtụ akwụkwọ akụkọ na kọmputa ma dị dịka faịlụ PDF abụọ na ibudata na dịka HTML faịlụ iji gụọ na ntanetị. Ihe ka ọtụtụ n'ime ihe dị na nkwụsị ego.
Ọtụtụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ dị ukwuu na-edebanye aha na magazin weebụ, dị ka ụfọdụ akụkụ nke National Health Service. Nkwekọrịta iwu pụtara na ha nwere ike inye ohere maka ụmụ akwụkwọ ha na ndị ọrụ ha. Ndị isi ọha na United Kingdom na-eji nke nta nke nta enweta ihe onwunwe e bipụtara na UK site na British Library, National Library of Scotland na National Library of Wales. Na ntinye akwukwo ndi a enwere ike iga ije-na ndi nleta. Na-enyocha mgbe niile iji hụ ma ị nwere ike ịnweta ụzọ tupu ị gaa njem.
Ebe dị mma mgbe niile Na-enyocha British Library.
Ndị Scotland nwere ike ịnwale National Library of Scotland. Ọ bụrụ na ị nọ na Wales, na National Library of Wales kwesịrị ịbụ nkwụsị mbụ gị.
Ọrụ nke Foundation Foundation
Na weebụsaịtị a, anyị ga-agbalị ịnweta ohere ọ bụla ma ọ bụ nchịkọta nke akwụkwọ ọ bụla anyị kwuru. Anyị ga-enyekwa onye na-ebipụta akwụkwọ ma ọ bụ ohere ọ bụla ị nwere ike ịnweta iji gụọ. Atụmatụ ahụ bụ iji wepụ ihe ọmụma dị mkpa ma kọọ ya n'ụzọ nke ọtụtụ mmadụ nwere ike ịnweta.